LA OGAADAY: Tababare Premier League Wacdarro Kasoo Dhigay Oo Ay Maamulka Chelsea U Leexan Doonaan Haddii Ay Waayaan Franka Lampard Oo La Ogaaday. - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
June 17, 2019 at 13:00 LA OGAADAY: Tababare Premier League Wacdarro Kasoo Dhigay Oo Ay Maamulka Chelsea U Leexan Doonaan Haddii Ay Waayaan Franka Lampard Oo La Ogaaday.2019-06-17T13:00:24+01:00 CAYAARAHA
Chelsea iyo Juventus ayaa ugu dambayn shalay si rasmi ah u shaaciyay inay heshiis buuxa ka gaadheen in tababare Maurizio Sarri uu ku laabto dhinaca horyaalka Talyaaniga lana wareego xilka tababarenimo ee Juve.
Sarri ayaa kaliya hal xilli ciyaareed kusoo qaatay Chelsea waxaana uu kusoo hoggaamiyay hanashada Europe League isagoo dhinaca kale u suurtogaliyay inay ku dhammaystaan booska saddexaad ee kala sarreynta horyaalka.
Bixitaanka Sarri oo ahaa tababare aysan marnaba aragtidiisa ciyaareed ku qanacsanayn jamaahiirta Chelsea ayaa albaabka u furaysa tababareyaal dhawr ah oo jagadaas la wareega.
Frank Lampard oo in badan soo difaacay Blues ka ciyaartoy ahaan ayaa ah shaqsiga halka ugu horreysa kaga jira inuu xilkan la wareego balse lama oga haddii uu ka iman doono Derby County oo uu hal xilli ciyaareed oo kaliya lasoo qaatay.
Haddaba, Wargeyska Times ayaa ka hadlay tababaraha ay Chelsea u wareegi doonto haddii ay ku fashilanto inay keensato Lampard waxaana tababarahaas lagu sheegay Nuno Espirito Santo oo ah hoggaamiyaha Wolves.
Nuno Espirito Santo ayaa xilli ciyaareedkan wacdarro kusoo dhigay horyaalka isaga oo dhibco kasoo gooyay ama saddexda dhibcoodba kawada qaadanayay kooxaha ugu waaweyn horyaalka sidoo kalena u tartamay tababarihii sanadka.
Intaa waxa dheer in wargeyska kale ee Express Sport uu toddobaad kahorba sheegay in kooxda Chelsea ay liis lix tababare ah oo ay doonayso inay tababaraheeda xiga ka dhex xulato ku dartay Nuno.
Heshiiska haatan ee Nuno uu kula joogo Wolves ayaa ah mid dhammaan doona bisha June ee sanadka 2021 waana wakhti aan aad u fogayn.
Waxqabadka tababarahan ayaa ah in laba xilli ciyaareed oo uu kooxdaas soo joogay uu markii koowaad kusoo guuleeyay horyaalka heerka labaad halka uu xilli ciyaareedkii dhawaa usoo saaray tartamada Yurub gaar ahaan UEFA Europe League.
« UN to strengthen ties with Somalia: official
xeer-ilaalinta Puntland oo shaacisay wakhtiga la dhegaysan doono dacwadda Rafcaan Kiiskii Caa’isha Ilyaas »